ပရဟိတ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း – Cele Posts
ကိုဗစ်ရောဂါ ရောဂါကူးစက်မှု တွေကြောင့် ပြည်သူတွေ တစ်နေ့တစ်နေ့ သေဆုံးရသူတွေ များစွာရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ ဒီလို ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှကို ပရဟိတ အသင်းသားတွေကပဲအခကြေးငွေမယူဘဲ ရှေ့ဆုံးက နေ့မအား ညမအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ် ။
သေဆုံးသူတွေ များတာကြောင့် မီးသင်္ဂြိုဟ်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေ ကိုလည်း သူတို့ကပဲ အစအဆုံး အားလုံး ပီစီးသည် အထိ လုပ်ဆောင်ပေးနေကြတာပါ ။ဒါကြောင့်လည်း ပြည်သူတွေ အားလုံးကကျေးဇူးတင် နေကြပါတယ် ။ သူတို့အတွက်လည်း ကျန်းမာအောင် ပြည်သူတွေက တတ်နိုင်သလောက် အစားအသောက်တွေ ၊ အားဆေးတွေ လှူဒါန်းပေးလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
အခုလည်း ပိုင်ဇေရဲထွန်း တို့ မိသားစုကနေပြီး ပရဟိတ သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ထမင်းဗူးတွေနဲ့ အအေးတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပရဟိတ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကိုလည်း “ 24.7.2021 ပင်ပန်းနေကြပီဆိုတာ သိပါတယ် ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ! My Taste by Thae မိသားစုအလှူ မိဘ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ​၏ နောက်ဆုံးခရီးကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ကူညီနေကြသူ ဝန်ထမ်းများ ပရဟိတသူရဲကောင်းများအား ဦးညွတ်ပါ​၏နောင်လဲလှူချင်ပါသေး​၏ အများကြီးလည်းလှူချင်ပါသေး​၏ ခဏခဏလဲလှူချင်ပါ​၏ လှူနိုင်သောသူဖြစ်ရပါလို​၏” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
Photo – Paing Zay Ye Tun
ပရဟိတ သူရဲကောငျးတှရေဲ့ မှနျမွတျတဲ့ လုပျရပျတှကေို ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဇရေဲထှနျး
ကိုဗဈရောဂါ ရောဂါကူးစကျမှု တှကွေောငျ့ ပွညျသူတှေ တဈနတေ့ဈနေ့ သဆေုံးရသူတှေ မြားစှာရှိနတောကို တှရေ့ပါတယျ ။ ဒီလို ကိုဗဈနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကိစ်စမှနျသမြှကို ပရဟိတ အသငျးသားတှကေပဲအခကွေးငှမေယူဘဲ ရှဆေုံ့းက နမေ့အား ညမအား ကူညီဆောငျရှကျပေးနကွေပါတယျ ။
သဆေုံးသူတှေ မြားတာကွောငျ့ မီးသင်ျဂွိုဟျဖို့ အခကျအခဲဖွဈနတောတှေ ကိုလညျး သူတို့ကပဲ အစအဆုံး အားလုံး ပီစီးသညျ အထိ လုပျဆောငျပေးနကွေတာပါ ။ဒါကွောငျ့လညျး ပွညျသူတှေ အားလုံးကကြေးဇူးတငျ နကွေပါတယျ ။ သူတို့အတှကျလညျး ကနျြးမာအောငျ ပွညျသူတှကေ တတျနိုငျသလောကျ အစားအသောကျတှေ ၊ အားဆေးတှေ လှူဒါနျးပေးလာကွတာ တှရေ့ပါတယျ။
အခုလညျး ပိုငျဇရေဲထှနျး တို့ မိသားစုကနပွေီး ပရဟိတ သူရဲကောငျးတှေ အတှကျ ထမငျးဗူးတှနေဲ့ အအေးတှကေို လှူဒါနျးခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ပရဟိတ သူရဲကောငျးတှရေဲ့ မှနျမွတျတဲ့ လုပျရပျတှကေို ကြေးဇူးတငျကွောငျး ကိုလညျး “ 24.7.2021 ပငျပနျးနကွေပီဆိုတာ သိပါတယျ ! ကြေးဇူးတငျပါတယျ ! My Taste by Thae မိသားစုအလှူ မိဘ ဆှမြေိုး မိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြား​၏ နောကျဆုံးခရီးကို ပိုငျရှငျကိုယျစား ကူညီနကွေသူ ဝနျထမျးမြား ပရဟိတသူရဲကောငျးမြားအား ဦးညှတျပါ​၏နောငျလဲလှူခငျြပါသေး​၏ အမြားကွီးလညျးလှူခငျြပါသေး​၏ ခဏခဏလဲလှူခငျြပါ​၏ လှူနိုငျသောသူဖွဈရပါလို​၏” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။